‘कबड्डी ४’बाट सुरु होला मिरुनाको हिटको यात्रा ? - Bikram Shahi
Home मनोरञ्जन समाचार ‘कबड्डी ४’बाट सुरु होला मिरुनाको हिटको यात्रा ?
‘कबड्डी ४’बाट सुरु होला मिरुनाको हिटको यात्रा ?
Bikram Shahi Thursday, April 08, 2021 मनोरञ्जन, समाचार,
नायिका मिरुना मगरको सुन्दरता र उनको अभिनयको प्रशंसा खुबै हुन्छ । तर, मिरुनाले हिट चलचित्र दिन नसक्दा उनलाई समस्या परिरहेको छ । उनले अभिनय गरेका कुनै पनि चलचित्र बक्स अफिसमा चलेका छैनन् । ‘लालपूर्जा’ नामक चलचित्रबाट यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी मिरुनाले यसपछि केही चलचित्रमा काम गरिन् । उनले ‘रोज, साइनो र च च हुई’मा काम गरेकी छिन् । तर, यी सबै चलचित्र बक्स अफिसमा असफल भए । यसलेगर्दा, मिरुनाको चलचित्र यात्रा पनि सुखद हुन सकेन ।
उनै, मिरुना अब भने एक हिट सिरिजमा काम गर्दैछिन् । चलचित्र ‘कबड्डी ४’को मुख्य नायिकाको रुपमा उनले काम गर्दैछिन् । यो चलचित्रमा अनुवन्धित भएपछि मिरुना लण्डनबाट नेपाल आएकी छिन् । उनी, हाल चलचित्रको वर्कशपमा व्यस्त छिन् ।
लगातार असफल चलचित्रका कारण चलचित्र क्षेत्रमा स्थापित हुन नसकेकी मिरुनालाई यो हिट सिरिजले स्थापित गर्ने अपेक्षा धेरैको छ । मिरुना पनि लामो समयदेखि हिटको खोजीमा थिइन् । यही चलचित्रबाट नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा नायिका रीश्मा गुरुङ चर्चित बनिन् भने उपासना सिंह ठकुरी स्थापित नै भइन् । मिरुनाको हिटको यात्रा यो चलचित्रबाट सुरु हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
तस्वीरः मिरुनाको सामाजिक संजालबाट
Tags # मनोरञ्जन # समाचार
Author: Bikram Shahi at Thursday, April 08, 2021
Tags मनोरञ्जन, समाचार